Xog: 4 Sabab dartood oo ay ciidamada AMISOM uga soo baxayaan Sh/Hoose |
Xog: 4 Sabab dartood oo ay ciidamada AMISOM uga soo baxayaan Sh/Hoose
Faaladaan waxaan ku soo qaadaneyna dhibaatada soo wajahday ciidamada Amisom ee sababtay inay soo faarujiyaan Gobolka Shabeelaha hoose iyagoo iminka ku harsan degmooyin dhowr ah halka kuwa kalana ay soo baneeyeen.
Maalmihii ugu danbeeyay warbaahintu waxay hadal heysay inay cabsi soo wajahaday Amisom kadib weerarkii alshabaab ka qabsadeen saldhigii leego ay ku lahaayeen halkaasoo wixii yaalay la qaatay,islamarkaana wixii ciidan ahaana mid la dilay,mid dhaawacmay iyo mid baxsaday ay noqdeen.
Waxaa jirta afar hadal heyn oo mid uun ay xaqiiqo tahay inay sabab u tahay sababta ka danbeysa inay ka soo yaacaan degmooyin iyo deegeeno ka tirsan Gobolka Sh.hoose.
1-cabsi ciidamada Amisom ka qabaan weerarada alshabaab ee bisha Ramaadan
2-Mushaar la’aan soo wajahday
3- Qorshe la isla ogyahay oo ah ciidamada Itoobiyaanku badalaan kuwa Burindi iyo Uganda kasocda.
4- waqti dheereyn joogitaanka ciidamada Amisom ee Soomaaliya si mushaarku u sii socdo
Aqriste adiguba ka feker afartaan amuuurood midna ka dooro inay tahay sababta dhabta ah ee ciidamada Amisom uga firxanayaan deegaanada Gobolka shabeelaha hoose.
Qodobka afaraad waxay ku cadeyd war dhawaan ka soo baxay qabiir Milateri Soomaaliyeed ah kaasoo warbaahinta qaar u sheegay in Alshabaab awood u laheyn inay xero milateri oo difaacyo badan leh ay si sahlan u galaan balse ay sheekadu tahay mid la isla ogaa oo la rabo in caalamka loogu muujiyo in wali qatarta alshabaab taagan tahay loona baahan yahay in ciidamada amisom sii howlgalaan.
Aniga aragtideyda waxay ila tahay in amisom dhaqaale raadis tahay sidoo kalana jabkii ka soo gaaray deegaanka leegana uu ku yimid ciidamada oo mar dhow soo degay halkaasi loogana faa’iideystay dhufeysyadii lagu yaqaanay oo aan u diyaarsaneyn sida sawiradii leego laga arki karo , kaliya silig ayaa dhufeys u ahaa.
Milateri ahaana Alshabaab way dhisan yihiin marka tababar shaqsi la dhaho iyo mooral maxaa yeelay alqaacida ayaa soo tababartay badankood laakiin qalabka ayaa la dheeryahay waana waxa kaliya ee macno sameyn kara marka dagaal la dhaho.
W/Qorey: Abdi Fatah Mohamed Salad